2 Ndị Eze 13 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
2 Ndị Eze 13:1-25
13 N’afọ nke iri abụọ na atọ nke ọchịchị Jehoash+ nwa Ehazaya+ eze Juda, Jehoahaz+ nwa Jihu+ ghọrọ eze Izrel wee chịa afọ iri na asaa na Sameria.
2 O wee na-eme ihe jọrọ njọ n’anya Jehova,+ na-esokwa mmehie Jeroboam+ nwa Nibat ji mee ka Izrel mehie.+ Ọ hapụghị ya.
3 Jehova wee weso+ Izrel iwe dị ọkụ, nke mere na o nyefere ha n’aka Hazel+ eze Siria na Ben-hedad+ nwa Hazel n’ụbọchị ha niile.
4 Ka oge na-aga, Jehoahaz mere ka obi Jehova jụrụ,+ nke mere na Jehova gere ya ntị;+ n’ihi na ọ hụrụ mmegbu a na-emegbu Izrel,+ n’ihi na eze Siria megburu ha.+
5 N’ihi ya, Jehova nyere Izrel onye nzọpụta,+ nke mere na ha si n’okpuru Siria pụta, ụmụ Izrel wee biri n’ụlọ ha dị ka ha biri n’oge gara aga.+
6 (Ọ bụ naanị na ha ahapụghị mmehie ụlọ Jeroboam, nke o ji mee ka Izrel mehie.+ O jere ije n’ime ya;+ ọbụna ogwe osisi dị nsọ+ guzokwa na Sameria.)
7 N’ihi na ọ dịghị ndị ọ hapụụrụ Jehoahaz ma e wezụga mmadụ iri ise ndị na-agba ịnyịnya na ụgbọ ịnyịnya iri nakwa puku ndị ikom iri ji ụkwụ aga,+ n’ihi na eze Siria bibiri ha,+ wee mee ka ha dị ka uzuzu nke dị n’ebe nzọcha mkpụrụ.+
8 Ma ihe ndị ọzọ metụtara Jehoahaz na ihe niile o mere na ike ọ kpara, ọ̀ bụ na e deghị ha n’akwụkwọ+ ihe ndị mere n’ụbọchị ndị eze Izrel?
9 N’ikpeazụ, Jehoahaz sooro nna nna ya hà dinaa, ha wee lie ya na Sameria;+ Jehoash+ nwa ya wee malite ịchị n’ọnọdụ ya.
10 N’afọ nke iri atọ na asaa nke ọchịchị Jehoash eze Juda, Jehoash+ nwa Jehoahaz ghọrọ eze Izrel wee chịa afọ iri na isii na Sameria.
11 O wee na-eme ihe jọrọ njọ n’anya Jehova.+ Ọ hapụghị mmehie niile Jeroboam nwa Nibat ji mee ka Izrel mehie.+ O jere ije n’ime ha.
12 Ma ihe ndị ọzọ metụtara Jehoash na ihe niile o mere na ike ọ kpara na otú o si buso Amazaya eze Juda agha,+ ọ̀ bụ na e deghị ha n’akwụkwọ+ ihe ndị mere n’ụbọchị ndị eze Izrel?
13 N’ikpeazụ, Jehoash sooro nna nna ya hà dinaa, Jeroboam+ wee nọkwasị n’ocheeze ya. E wee lie Jehoash na Sameria n’ebe e liri ndị eze Izrel.+
14 Ma Ịlaịsha+ dara ọrịa, bụ́ ọrịa ga-egbu ya.+ Jehoash bụ́ eze Izrel wee gbadakwuru ya ma malite ịkwa ákwá n’ihu ya, sị: “Nna m,+ nna m, ụgbọ ịnyịnya agha Izrel na ndị na-agba ịnyịnya ya!”+
15 Ịlaịsha wee sị ya: “Were ụta, chịrịkwa akụ́.” O wee were ụta, chịrịkwa akụ́.
16 O wee gaa n’ihu ịsị eze Izrel: “Jide ụta ahụ.” O wee jide ya, e mesịa, Ịlaịsha tụkwasịrị aka ya n’aka+ eze.
17 O wee sị: “Meghee windo nke chere ihu n’ebe ọwụwa anyanwụ.” O wee meghee ya. N’ikpeazụ, Ịlaịsha sịrị: “Gbaa!” O wee gbaa. O wee sị: “Akụ́ nzọpụta nke Jehova, ee, akụ́ nzọpụta+ nke a ga-agba Siria! Ị ga na-egbukwa ndị Siria n’Efek+ ruo mgbe ha gwụchara.”
18 O wee sị: “Chịrị akụ́.” O wee chịrị ha. O wee sị eze Izrel: “Tie ha n’ala.” O wee tie ha n’ala ugboro atọ kwụsị.+
19 Onye nke ezi Chineke+ wee weso ya iwe; o wee sị: “Ọ bụ ugboro ise ma ọ bụ isii ka a tụrụ anya ka i tie ha n’ala! A sị na i mere otú ahụ, ọ gaara abụ na ị ga na-egbu ndị Siria ruo mgbe ha gwụchara, ma ugbu a, ọ bụ ugboro atọ ka ị ga-emeri Siria.”+
20 E mesịa, Ịlaịsha nwụrụ, ha wee lie ya.+ Ma e nwere ìgwè ọ lụọ ọ gbalaga+ nke ndị Moab,+ bụ́ ndị na-abata mgbe niile n’ala ahụ ná mmalite afọ.
21 O wee ruo na mgbe ha na-eli otu nwoke, lee, ha hụrụ ìgwè ọ lụọ ọ gbalaga ahụ. Ha tụbara nwoke ahụ ozugbo n’ebe e liri Ịlaịsha wee gbaa ọsọ. Mgbe ozu nwoke ahụ metụrụ ọkpụkpụ Ịlaịsha, ọ dịrị ndụ+ ozugbo ma guzoro n’ụkwụ ya.+
22 Ma Hazel+ eze Siria megburu+ Izrel n’ụbọchị niile nke Jehoahaz.
23 Otú ọ dị, Jehova meere ha amara,+ meekwara ha ebere+ ma chee ihu n’ebe ha nọ n’ihi ọgbụgba ndụ+ nke ya na Ebreham+ na Aịzik+ na Jekọb;+ ọ chọghịkwa ibibi ha,+ ọ chụpụghịkwa ha n’ihu ya ruo ugbu a.
24 N’ikpeazụ, Hazel eze Siria nwụrụ, Ben-hedad nwa ya wee malite ịchị n’ọnọdụ ya.
25 Jehoash nwa Jehoahaz wee nata Ben-hedad nwa Hazel obodo ndị ọ naara Jehoahaz nna ya n’agha. Jehoash meriri ya ugboro atọ, o wee nata ya obodo ndị bụ́ nke Izrel.+
2 Ndị Eze 13
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D12%26Chapter%3D13%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl